“Soomaalidu cayrta Sweden waa rabaan balse dhaqankeeda ma rabaan” - iftineducation.com
“Soomaalidu cayrta Sweden waa rabaan balse dhaqankeeda ma rabaan”
aadan21 / June 23, 2016
iftineducation.com – Sidaa waxaa qoray nin Irani ah oo lagu magacaabo Mohamed Omar, isagoo si qoto dheer wax uga qoray dabeecadaha Soomaalida ay uga faa’idaystaan cayrta Sweden. Ninkaan oo ah nin diinta Islaamka ka baxay ayaa mowduuciisa waxa uu ku qoray wargeys ay leeyihiin xisbiga SD , halkaasi oo uu si faahfaahsan wax uga qoray in Muslimiinta Sweden, qaasatan Soomaalidu aysan dooneyn in ay qaataan dhaqanka wadanka balse ay jecelyihiin cayrteeda.
Ninkaan ayaa dhowr tusaale u soo qaatay Soomaalida oo ay ka midyihiin sida ay caruurtooda ugu diraan wadankii hooyo si quraanka loo baro iyo dhaqankooda, iyaga oo aan dooneyn in ay qaataan dhaqanka Sweden. Waxa uu intaasi ku daray in waalidiinta Soomaalidu marka ay sidaa sameeyaan ay cayrta Sweden ku qaataan iyaga oo Somalia jooga. Markii lacagtu dhamaato ayay dib u soo noqdaan, ayuu qoray.
Waxa uu sidoo kale tusaale u soo qaatay in qaar badan ay isku qoraan da’ weyn si ay u qaataan lacagta beeshinka, oo ay Somalia ugu laabtaan isla markaana ay Sweden biilka ka qaataan. Qaar kale ayuu sheegay in ay isku qoraan cuduro iyo in ay cuuryaan yihiin si lacag joogto ah loo siiyo, iyaga oo wadankooda jooga. Dadkaasi ayuu ku sheegay in ay markasta doonayaan in ay cayrta ka qiyaamaan dowlada Sweden, iyagoo ah Muslimiin diinta ku dhagan.
Waxa uu sidoo kale soo qaatay in Muslimiintu ay si joogto ah qaylo dhaan uga muujiyaan in caruurta Muslimiinta ay qaadato dowladu, oo ay si weyn uga soo horjeedaan in loo geeyo qoysaska Swedishka ah ee gaalada ah, kuwaaso uu sheegay in masaajida laga sheego in ay yihiin kuwo caruurta fara-xumeeya ama diinta ka saaraya.
Guud ahaan mowduuca ninkaan oo ku dhisan naceybkiisa ka dhanka ah Muslimiinta, ayaa haddana waxyaabaha qaar ee uu ka qoray Soomaalida ay xaqiiq yihiin, sida in dad caafimaad qaba ay cudur isku qoraan ama ay isweyneeyaan si ay u noqdaan beeshin. Si kastaba ha ahaatee, ninkaan ayaa ah cunsuri weyn oo si joogto ah u cambaareeya Muslimiinta iyo Islaamka.
raaxada galmada dumarka macaan miyaa
Aabe ilmahiisa Swedish yihiin oo loo diiday in loo keeno